Tetikasa Mahavelona : Fiahiana ara-pahasalamana ireo mpamboly lavanila -
AccueilSongandinaTetikasa Mahavelona : Fiahiana ara-pahasalamana ireo mpamboly lavanila
Tetikasa Mahavelona : Fiahiana ara-pahasalamana ireo mpamboly lavanila
Ho fanomezana tolotra fiahiana ara-pahasalamana ho an’ny tantsaha mpamboly lavanila any amin’ny faritra SAVA dia miara-miasa akaiky ny “Positive Planet International” sy ny Symrise. Tantsaha mpamboly lavanila avy amin’ny fokontany 80 miisa 16 500 any amin’ny faritra SAVA no mahazo tombontsoa amin’izany ankehitriny, ao anatin’ny tetikasa Mahavelona. Mandrotsaka latsakemboka 80 000 Ar ho an’ny fianakaviana ahitana olona fito isan-taona ny Symrise fa raha mihoatran’ny fito kosa ny olona ao amin’ilay fianakaviana dia manampy sora-bola 16 000 ariary ilay ankohonana, araka ny fanazavana. Marihina fa voarakotry ny fiahiana ny fizahana sy fahazoana fanafody rehetra (70%) eny amin’ny toeram-pitsaboana, ny fiatrehana fandidiana sy fidirana hopitaly (100%), ka tafiditra ao anatin’izany ny fiterahana, fanamboarana na fanesorana nify, fitsaboana maso sy ny maro tsy ho voatanisa. Ireo izay santionany amin’ireo fiahiana ara-pahasalamana raisin’ny « mutuelle de santé” Mahavelona ihany.
Ny Symrise izay moa dia fantatra amin’ny famatsian’ny hanitra sy tsiro eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ary mitana ny 11% amin’ny tsena kosa ny “Positive Planet International”. Tao anatin’ny 20 taona izay, nanao asa hanamafisana ny fidiram-bolan’ireo mponina hita fa marefo ny “Positive Planet International” satria rehefa tsy salama ny olona iray dia tsy afaka mamokatra ary azo antoka fa tsy hitondra fampandrosoana ho azy sy ny ankohonany, ary indrindra ny firenena izany, ity fiahiana ara-pahasalamana azy ireo amin’ny alalan’ny “mutuelle de santé” Mahavelona ity, hoy ny talen’ny Ong Positive Planet International, Agnès Hière. Ity farany izay manana tetikasa 40 eto amintsika ary efa am-polon-taona no niasan’ny teto Madagasikara. Ankoatra ny any amin’ny faritra Sava, manana fiahiana fahasalamana roa hafa eto afovoan-tany sy any amin’ny faritra Diana ny Positive Planet international, hoy hatrany ny talen’ny ONG, Agnès Hière.
Notanterahina omaly, tany Anjeva, ny fambolen-kazon’ny antoko Hery Vaovaon’i Madagasikara (HVM). Tsy araka ny noeritreretina ireo olona nazoto nanohana ny antson’ity antoko manohana ny fitondrana ity. Saika nahitana solontena avokoa mantsy ireo HVM avy amin’ireo ...Tohiny